ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံး…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံး….
Posted by Crystalline on Jun 18, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
ဖတ်ဖူးတဲ့ဟာသလေးတွေပါ.. ခရက်ဒစ်ပေးဖို့ဘယ်စာအုပ်ကဖတ်မိလဲ ဆိုပြန်ရင်လည်း မမှတ်မိတော့ဘူး.. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖောက်တဲ့ သဘောဖြစ်နေရင်တော့ဖျက်ပေးပါ လို့ကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်..
တခါက အသက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ အဖိုး တစ်ယောက်ဆီကို ကျန်းမာရေးစာစောင် တစ်ခုကသွားပြီး အင်တာဗျူးလုပ်ပါသတဲ့…အဖိုးအခုလို အသက်ရှည်ကျန်းမာနေ တာဘာ့ကြောင့်ပါလဲပေါ့… အဖိုးကပြန်ပြောသတဲ့ သူကငယ်စဉ်ကတည်း နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု့ပုံမှန်လုပ်တယ်..စည်းကမ်းနဲ့နေတယ်စားတယ်..အထူးသဖြင့်သေရည်သေရက်ကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့..အရက်ကိုလုံးဝ မသောက်ခဲ့ဘူးတဲ့.. အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်နောက်ဖေးဘက်ကနေပန်းကန်ကျကွဲသံ၊ ထိုင်ခုံကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တဲ့ အသံတွေ ဝုန်းဒိုင်းနဲ့ထွက်လာတယ်တဲ့.. အင်တာဗျူးလာလုပ်တဲ့လူလည်းအလန့်တကြားနဲ့ အဖိုးမျက်နှာကို ကြည့်တာပေါ့..အဖိုးက ပြုံးတုံ့တုံ့နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသားရယ်တဲ့.. အဘရဲ့အဖေပါ…”အဖေကအဲလိုပဲ..အရက်သောက်တိုင်း သွေးဆိုးတာငယ်ငယ် ကတည်းကပဲလို့အဘအမေကပြောဖူးတယ်” တဲ့…
အင်္ဂလိပ်စာစောင်တခုမှာဖတ်ဖူးတာပါ.. ရေးတဲ့သူကိုမသိပေမယ့် ရှပ်ဘဲများ ဖြစ်နေမလားပဲ…. 
နောက်တပုဒ်ကတော့ မြန်မာစာစောင်တခုမှာဖတ်ဖူးတာပါ… စာစောင်နာမည် မမှတ်မိတော့ပါ…
ဆရာမသစ်လေးတစ်ယောက် အတန်းထဲမှာစာစသင်တဲ့နေ့.. အသီးလေးတွေပုံဆွဲပြရင်း ဘာသီးလဲမေးပါတယ်တဲ့.. အဲ..ဆရာမက ဘူးံသီးဆွဲပြပြီးဘာသီးလဲလို့မေးသတဲ့.. ကလေးတွေက -င်တုံးကြီးလို့ဖြေပါတယ်တဲ့..ဆရာမလေးလည်းသူ့ကိုမလေးမစားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဒေါသတွေနဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးကို သွားတိုင်တာပေါ့..ဆရာမအသစ်လေးဆိုတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း အရေးတယူနဲ့ အခန်းထိလိုက်လာပြီး ကလေးတွေကိုဆူမယ်ပေါ့.. အခန်းထဲလည်းရောက်ရော.. “မင်းတို့တော်တော်ဆိုးတာပဲ..ဆရာမအသစ်လေး မလေးစားပဲ စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရလား… ဟင်း..ကြည့်စမ်း..ကျောက်သင်ပုန်းမှာ လဲဘယ်ကောင်လက်ဆော့ပြီး -င်တုံးကြီးပုံဆွဲထားတာလဲ.. သွားဖျက်စမ်း..တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်တွေ” ..တဲ့.. တော်တော့ကိုပုံဆွဲကျွမ်းကျင် ပုံရပါတယ်..
သဘောတရားကိုသာမှတ်မိပြီး မူရင်းရေးသားသူရဲ့ အရေးအသားအတိအကျ ကိုမမှတ်မိတဲ့အတွက်..အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ..
-င်တုန်းကြီးပုံ မြောင်းတကာ ဦးလေးဆွဲထားတာပါဗျို့…….. ;)
အဲဒီကျောင်းဆရာမကို သဂျီးက သူ ့ပုံနှိပ်ဂျာနယ်မှာ ပင်တိုင် ကာတွန်းဆွဲပေးဖို့ရီကွက်စ် လုပ်ပါသတဲ့ဗျာ..
ပိုစ်ဖတ်ပြီ ပြုံးမိသလို စိတ်ညစ်တဲ့သူက ရေးနိုင်သားဘဲဆိုပြီး ထပ် ပြုံးမိပါကြောင်း ။
အစ်ကိုရေ..စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ပါ… စိတ်ညစ်လွန်းလို့စိတ်ပြေလက်ပျောက် online တက်ပြီး တွေ့သမျှစာထိုင်ဖတ်နေတယ်. ယခုပို့စ်တိုလေးကတော့ ကိုချစ်ရင်ထူးနှစ်တို့ ကိုရင်စည်သူတို့တင်ထားတဲ့ ဟာသလေးတွေကိုဖတ်မိရင်း ညီမဖတ်ခဲ့ပြုံးခဲ့တာလေးကိုပြန်သတိယလို့ ဝေငှလိုက်တာပါ…
ဘာမှ ချိတ်မညစ်နဲ့ အလင်းလေးရဲ့… အရမ်းစိတ်ညစ်ရင်
ဘရက်ပစ်၊ ဘက်ခမ်းနဲ့ ဂျွန်စော သုံးရုပ်စပ်ထားတဲ့
ကိုရင့်ကို အမြန်ဆုံး သတိရလိုက်..
စာတွေ အရမ်းထိုင်ဖတ်တော့ မျက်လုံးတွေ ကိုက်ကုန်တော့မှာပဲ…
စိုးတယ်.. စိုးရိမ်မိနေတယ်… မွှား.. မွှား…
အဟီးးဟီးးး ပဂျီကျော် ဆရာမလေးပေါ့နော် :grin:
-င်တုံးကြီး ဟာသမှာ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာကတော့ ဘူးသီးမဟုတ်ဘဲပန်းသီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဟာသစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မထင်ပါဘူး…ကျေးဇူးပါ…အဲဒါကြောင့်လည်းညီမက ကြိုပြီးစကားခံထားတာပါ… ညီမဖတ်မိတာက တော့ မြန်မာစာအုပ်တခုထဲမှာပါ… ညီမ Gourd နဲ့ Apple လောက်တော့ခွဲသိပါတယ်…
ခရစ်လေး ညစ်တယ်ကြားရလို ့၊ ကိုပေ လဲ မပျော်နိုင် ဖြစ်သွားရပါဘီကွယ် ။
သလင်းကျောက်လေးဆိုတော့… ကိုရင်က ကဗျာဆန်ဆန်
အလင်းလေး ပို့စ် ခရက်ဒစ်မပေးလဲ ဖျက်စရာ့လား..
ဒီက မော့ကြီးတွေက ကိုရင်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးဒါ… ဟီးးး
အလင်းလေးစိတ်ညစ်နေတိုင်း ရွာထဲက ကိုရင်တို့လို
များများဖောပေးလေ.. စိတ်ညစ်ပြေလေးပဲ.. ;)
နှူဘာဂိုဏ်းတည်ထောင်တဲ့ အစပထမနေ့တွေကိုမမှီလိုက်လို့ ဂိုဏ်းအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိခဲ့ရသော်ညားလည်းပဲ..ဂိုဏ်းသားတွေလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဦးဦးလေးတွေရဲ့ ဇာတိသရုပ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရေးရေးလေး သဘောပေါက်လာပြီးဖြစ်ပါကြောင်း.
နှူဘာဂိုဏ်းတည်ထောင်တဲ့ အစပထမနေ့တွေကိုမမှီလိုက်လို့ ဂိုဏ်းအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိခဲ့ရသော်ငြားလည်းပဲ..ဂိုဏ်းသားတွေလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဦးဦးလေးတွေရဲ့ ဇာတိသရုပ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရေးရေးလေး သဘောပေါက်လာပြီးဖြစ်ပါကြောင်း.
အသက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ အဖိုး တစ်ယောက်ကတော့
ဒီဖက်က _င်တုံးကြီးဆွဲတဲ့ ဆြာမကို ဟိုဘက်မှာ လိပ်ပြာပုံ သွားဆွဲခိုင်းရင် ဘယ်လိုနေမယ် မသိ
လိပ်ပြာပုံက အသီးမဟုတ်ဘူးလေ ။ဆွဲချင်တာက အသီးပုံ ဆိုတော့ သရက်သီးပုံ စောင်းလျှားသီးပုံ မဆွဲမိရင် ကောင်းမယ်..။
ူဟား…မိဘီဟေ့… အဲဒါ လိပ်ပြာဆွဲတဲ့ ရွှေမင်းသား လက်ချက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်…။
အဲ ဆရာမကို လိပ်ပြာပုံခေါင်း တတ်ခိုင်းရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်..
ဘာပဲပြောပြော ဒီဘက်က အသီးပုံဆွဲတဲ့ ဆရာမရော ဟိုဖက်က လိပ်ပြာပုံဆွဲတဲ့ လူကြီးရော
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြုံးပါဆိုလို့ ၊ ရေတောင်မသောက်ပဲပြုံးလိုက်ပါတယ်ဗျို့။
ယမကာလုင်များ အတွက်၊အဖိုးဂျီးအင်တာဗျူးက မိုက်ထြွာ ဗျား —–။
ရှင်ဘဲ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်ပဲဖြစ်နေမလားပါ ဟိဟိ နောက်တာပါ စိတ်မဆိုးကျေးနော်